Edebanyela Vivo Nex 3 5G na nchekwa data Geekbench | Gam akporosis
El Vivo Nex 3G Ọ bụ ọkọlọtọ na-esote ụlọ ọrụ Asia. Anyị na-atụ anya ọtụtụ ihe site na ọdụ a. N'ime onwe ya, anyị na-atụ anya njirimara arụmọrụ dị elu na nkọwapụta teknụzụ na ngalaba nke ọ bụla, yabụ anyị ga-eche ihu nke a ga-enye dị ka otu n'ime nhọrọ ndị kachasị ewu ewu na kachasị mma na ahịa afọ a.
Ngwaọrụ a dị nso ịmalite; Na ajụjụ, ọ bụ Septemba 16 -ọnwa a- ụbọchị a ga-ekwuputacha ya na njirimara ya niile na nkọwa ọnụahịa yana nnweta. Tupu ụbọchị ahụ abịa Geekbench chọrọ iwere ya maka ịnyagharị n'elu ikpo okwu ya ma denye aha ya na nchekwa data ya na ụfọdụ nkọwapụta ọrụ aka nke ọ ga-egosi n'etiti ndị ọrụ.
Edere Vivo Nex 3 5G na Geekbench dika "vivo V1924A", dị ka a pụrụ ịhụ na nseta ihuenyo na-esonụ. E gosipụtara ekwentị a n'ebe a na sistemụ arụmọrụ nke Android 9, RAM nke 7,407 MB -nke ruru ihe 8 GB- na ikpo okwu mkpanaka asatọ nwere isi ugboro 1.78 GHz na ije 64-bit. O doro anya na data ikpeazụ a na-ezo aka na Qualcomm's Snapdragon 855 Plus, chipset kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ a kwalitere, ọbụnadị ma ọ bụrụ na anyị echebara nsonaazụ ọ jisiri ike nweta.
Vivo Nex 3 5G na Geekebench
Na nkọwa zuru ezu, njedebe dị elu nwere ike nweta akara nke 3,627 na otu-isi ule, ebe na multi-isi ọ debara akara nke 11,347 isi.
120W Super FlashCharge ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ nkà na ụzụ nwere ike ịmalite na Vivo Nex 3
Ngwaọrụ ahụ apụtaworị na webụsaịtị nke Chinese Telecommunications Regulatory Agency (TENAA) maka asambodo. Icheta, Vivo NEX 3 nwere akụkụ nke 167.4 x 76.1 x 9.4 mm ma tụọ gram 218.5. Ekwentị nwere a Ngosipụta nke Super AMOLED nke anụ ọhịa 6.89-inch na-akwado mkpebi FullHD + nke 2,256 x 1,080 pikselụ. Ejikọtara ihuenyo NEX 3 na ihe mmetụta mkpịsị aka. A ga-enwe naanị ụdị 4G na 5G. Ngwaọrụ ahụ nwekwara ike ịnwe ụdị dị iche iche nke 12GB Ram.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Vivo Nex 3 5G debara amaokwu ya na Geekbench wee kwado ụfọdụ nkọwa ya
Microsoft kwuru na US anaghị emeso Huawei ihe n'ụzọ adịghị mma